လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Wednesday, March 15, 2017 - 14:00
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် Steel Pole များဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Invitation for Bids (Steel Pole).pdf
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များ အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ၊ ပါဝါမီတာနှင့် စီတီမီတာများ ဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-
၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ( ၂၃ . ၁ . ၂၀၁၇ ) ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ( ၁၀ . ၂ . ၂၀၁၇ ) ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန် - ၁၂ : ၀၀ နာရီ
၃။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက်စုံစမ်း၀ယ်ယူ နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၅၊ Fax - ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၆
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း (ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း များအား မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-
16-17 Line & Accessories.pdf
Friday, December 30, 2016 - 12:00
Invitation for Bids , Concrete Poles for National Electrification Project
The Ministry of Electricity and Energy now invites sealed bids from eligible bidders for supply of spun concrete pole 10 meter and 12 meter, for the total quantities of 94,786 poles to be delivered in calendar year 2017 to multiple destinations in all Regions and States of Myanmar. Domestic preference with the margin of 15% will apply. The goods will be grouped into 10 lots and bidders may submit bid for any one or more lots.
Invitation for Bids (Concrete Pole).pdf
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ မအူပင်- ကျိုက်လတ် - ဖျာပုံလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လမ်းနှင့်လွတ်ကင်း မှုမရှိသော ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာများ ပြောင်းရွှေ့တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော ကွန်ကရစ်တိုင်၊ ၃၃ ကေဗွီ၊ ၁၁ ကေဗွီ ၊ ၀.၄ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ထရန် စဖော်မာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
16-17 Transformer Accessories.pdf
Friday, December 23, 2016 - 12:00
ESE 16-17 (Installation).pdf
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ အတွက် လိုအပ်သော 66 KV, 33 KV Transformer (14) Nos ဝယ်ယူရန်နှင့် လျှပ်စစ်ပုံစံများ ပုံနှိပ်အပ်နှံရန် အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ‌ဆောင်ရွက်လိုပါသည် -
၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ( ၂၅ . ၁၁. ၂၀၁၆) ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ( ၁၂ . ၁၂ . ၂၀၁၆) ရက်
၃။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက်စုံစမ်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၄၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၄၅၊ Fax - ၀၆၇ ၈၁၀၄၂၄၆
Monday, December 12, 2016 - 12:15